भोलि चैत २६ गते मंगलवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
चैत २५, २०७५ PS
भोलि मिति २०७५ साल चैत महिनाको २६ गते मंगलवार , सोहि अनुरुप सन् २०१९ अप्रिल ९ तारिख , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल
परिवार तथा कार्य क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। बोल्दा बिशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। स्त्री बर्गको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। मनमा नकारात्मक विचार आउनबाट संयमित हुनुपर्ने छ। खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। अत्यधिक धन खर्च हुन सक्नेछ सम्भावना रहेको छ सजक रहनुहोला।
हरेक कार्य सावधानीपुर्वक गर्नुपर्ने छ। आर्थिक योजना सफल भएर जानेछन। कलाक्षेत्रमा मन लाग्नेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी धन खर्च हुने सम्भावना रहेको छ। परिवारमा खुसियाली छाउनेछ। दाम्पत्यजीवन उत्तम रहने छ। समग्रमा यहाको भोलिको दिन सुखमय बित्नेछ।
बोलीको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले बोल्दा बिशेष सावधानी रहनुपर्ने छ। स्वास्थ्यमा परिवर्तन आउनका साथै दुर्घटनाको योग रहेको छ। सामाजिक मान प्रतिष्ठामा आंच आउन सक्छ।अनावश्यक खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। इश्देवको नाम स्मरण गर्नाले हरेक समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
आर्थिक योजना तथा नया कार्यको थालनी गर्नका लागि समय उत्तम रहेको छ। व्यापार , व्यवसाय तथा नोकरीमा पदोन्नतिका साथै बिशेष लाभ हुनेछ। सन्तान सुखानुभूति हुनेछ। मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ।
नोकरी व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। अपेक्षाअनुरुप गरिएका हरेक कार्यहरु सरलतापूर्वक सम्पादन भएर जानेछ। उच्च पदाधिकारीको प्रसस्त साथ र सहयोग मिल्नेछ।जग्गा जनिम तथा बाहन सुख मिल्नेछ। खेलकुद तथा कला क्षेत्रमा प्रतिभा देखाउने उत्तम दिन रहेको छ।
धार्मिक यात्रा हुन सक्ने योग रहेको छ। बैदेशिक यात्राका लागि समय अनुकुल रहेको छ। आर्थिक लाभ हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताको अनुभूति हुनेछ। समग्रमा तपाइको भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्ने अनुकुल समय रहेको छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्नका लागि समय त्यति अनुकुल रहेको छैन। स्वास्थ्यमा बिशेष ख्याल राख्नु पर्नेछ। शत्रुले अनावश्यक मौकाको फाइदा उठाउन सक्छ संयम रहनुपर्ने छ। इश्वरभक्तिमा लाग्नाले बिशेष लाभ हुने देखिन्छ।
मनोरन्जनात्मक कार्यमा समय व्यतित भएर जानेछ। पारिवारिक वातावारणमा खुसियाली छाउने छ। सार्वजनिक मान , प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। नया बस्त्र तथा बाहन सुख प्राप्त हुनेछ। प्रियजनको भेटघाटले मन आनन्दित हुनेछ। अचानक धन लाभको योग समेत रहेको छ।
नोकरी व्यवसायमा आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। कार्यमा सफलता र यश प्राप्त हुनेछ। घरायसी बातावरणमा खुसियाली छाउने छ। कर्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ सहयोगप्राप्त हुनेछ। समग्रमायहाको दिन शुभ रहने देखिन्छ।
साहित्य कला क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। आर्थिक कारोबारमा बिशेष लाभ हुने देखिन्छ। सन्तान सुख मिल्नेछ। मित्रलाभ हुने देखिन्छ। परिवारमा आपसी घनिष्ठता तथा सुमधुरता छाउने छ।
स्वभावमा भावुकता अधिक हुनाले मानसिक बेचैनको स्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ। माताको तर्फबाट बिशेष लाभ हुने देखिन्छ। बिद्यार्थीवर्गका लागि पढाईमा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्य त्यति अनुकुल रहेको छैन। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान हानि हुन सक्ने भएकाले बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
कार्यमा अपेक्षाकृत सफलता मिल्नेछ। नया कार्यको थालनी गर्नका लागि समय अनुकुल रहेको छ। कला क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। जीवनसाथीका साथमा निकटताको अनुभूति हुनेछ। साथी भाईको साथमा छोटो यात्रा या पर्यटनको सम्भावना रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको बिचमा पनि सफलता हासिल गर्ने सकिने छ।
प्रकाशित : सोमबार, चैत २५, २०७५१४:४३
आज चैत २७ गते बुधवार, तपाईको दिन कस्तो रहला , हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
Bigul News Pvt. Ltd